Dhegeyso: Madaxweye Faroole oo ka warramaya lakulankii Madaxweynaha Kenya, Dawladda Somaaliyeed ugu baaqay inay sharciga iyo rabitaanka dadka tixgeliso. – make music movie Edition: International | Video
Published On: 5 June 2013 6:05 pm Wararka | By taleeh Dhegeyso: Madaxweye Faroole oo ka warramaya lakulankii Madaxweynaha Kenya, Dawladda Somaaliyeed ugu baaqay inay sharciga iyo rabitaanka dadka tixgeliso.
Madaxweynaha dawladda Puntland Cabdiraxmaan Faroole ayaa saxaafadda uga warraay la kulankii madaxweynaha Kenya ee Nairobi iyo waxyaalahay ka wada hadleen. Mudane Faroole wuxuu sheegay waxyaalahay ka wada hadleen inay ka mid ahayd nabadgelyada iyo xasilloonda Soomaaliya, arrimaha Jubaland oo uu ku tilmaamay madaxweyne Faroole inay dawladda Federaaliga ah ee Soomaaliyeed caqabad ku noqotay halkii laga rabey inay dooekeeda fuddaynta ah ka qaadato. Wuxuu kaloo Madaxweyne Faroole sheegay inay ka maamul ahaan [Puntland] taageersanyihiin wixii kasoo baxay shirkii muddada dheer loo fadhiyey magaalada Kismaayo ee lagu doortay Madaxweynaha Jubaland mudane Axmed Maxammed Islaam. Mudane Faroole wuxuu sheegay in loo baahanyahay in dawladda Federaaligu ay mas’uuliyadeeda ka mid tahay inay waddanka gaardhiiso maaulada Federaaliga ah oo dhammaystirma siday ku dhismi karaanna ay tahay siday hore ugusoo dhismeen Puntland iyo Somaliland haatanna ay kusocoto maamulka Jbaland. Wuxuu kaloo intaa raaciyey hawsha ay dawladdu imminka ku jirtaa inay tahay inay iyadu doonayso inay min tuulo ilaa degmo ilaa heer gobol ay iyadu dad ay rabto usoo magacawdo taasina aanay meelna kasoo gelin nidaamka Federaaliga ay ee iyada lagu doortay dastuurkana loogu sameeyey.
Madaxweyne Faroole wuxu kaloo sheegay inay ka Puntland horena ugu baaqeen haatanna diyaar uyihiin inay dhexdhexaadiyaan Dawladda Fedelaaliga ah iyo Dawladda Jubaland ee ka tirsan dawladaha Federaaliga Soomaaliyeed. Wuxuu kaloo intaa raacshay inay ka Puntland ahaan taageerayaan nidaamka Soomaali ku heshiisay ee Federaaliga sidaa daraaddeedna ay hiil iyo hooba lagarab taaganyihiin Maamulka Jubaland, sidaa si lamid ah ay isula garab taagi lahaayeen dadka Gobollada dhexe hadday go’aansadaan inay maamul ay ku midaysanyihiin dhistaan. halkan ka dhegeyso waraysigaa.